Amaholide in Sri Lanka - kukho elikhulu ukujabulela amabhishi segolide, emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka, izindawo zomlando kanye nje ufunde okuningi mayelana isiko Asian kanye namasiko. Kwakungenxa Sri Lanka kukhona emhlabeni elikhanyayo kwamanzi, vakashela disco ezinomsindo, ukudoba, izoso ogwini, uzizwe wena njengomphathi surfer Onqobayo olwandle oluthukuthele, noma uzame umdlalo ofana diving, ngihlole zezinto eziphila emanzini kanye phansi ogwini .
A ehhotela elincane esisogwini olusentshonalanga-ntshonalanga ye-Sri Lanka endaweni Hikkaduwa, esemgwaqweni ngempela kude, 143 km kusuka Colombo Airport 22 km ukusuka edolobheni Galle. Bungalow for 9 izinombolo lula ukuthola emgwaqweni omkhulu Galle Road phakathi izitolo eziningi, imigoqo kanye zokudlela ukuze ivumelane yonke akuthandayo. Bus futhi Isiteshi Sesitimela - 2 km kusuka ehhotela. Umuzi Ungahambisa kwi trishaw, ibhasi noma itekisi.
Cinnamon Garden - endaweni ethokomele 50 m kusuka nolwandle, nakho konke lokhu elisusa lolwandle enhle sandy ngilulekela for 4 km. Kwezinye izindawo ungathola giant Izimfudu zasolwandle. Kukhona omnene amagagasi futhi engena emanzini flat futhi kulula, okuyinto kudala izimo ephelele ukhululekile lolwandle iholide.
Ensimini ka Cinnamon Garden kuyinto lokubhukuda. Izivakashi nazo zijabulela Jacuzzi. Ihhotela kuhloswe ngokuyinhloko at abadala kanye nabantu abasha asebenzayo. iholide kaZwelonke - cishe inani elifanayo labesilisa Asians nabantu baseYurophu. Kuye ngesizini, ukwakheka yobuhlanga izivakashi zingahluka. Holiday uthayiphe ikakhulukazi lolwandle, intsha.
I Cinnamon Garden Ihhotela nethuba ubambe imihlangano yebhizinisi sibonga ihholo yesimanje ahlonyiselwe izingqungquthela. Ukubhalisa, igumbi inkonzo futhi ungumqondisi edilini lomshado ubusuku nemini. Interiors Ihhotela sika uthobekile, ifenisha nezitsha azibizi, kodwa amakamelo libanzi futhi egqamile. Amagumbi bahlanza ngesicelo abahlali. Abasebenzi okhuluma isiNgisi.
Cinnamon Garden (lihunyushwe kwelesiHeberu elithi ngesiNgisi. "Gardens Cinnamon") uhlala ngokuvumelana negama layo futhi kuyinto mpumalanga isakhiwo ejwayelekile Asian, ezungezwe ingadi enhle, lapho ungathola emithi yesundu, usinamoni kanye nezinye izitshalo ezingavamile. Eqinisweni, kule ndawo yeholide nesizotha enikeza anhlobonhlobo amasevisi:
yezintambo / inthanethi wireless;
ifoni, pay yocingo, ngefeksi;
cindezela nsuku zonke fresh;
imoto / Shuttle eziqashisayo;
ilondolo / yokuhlanza dry nesicathulo kukhanye;
isitoreji zezimpahla zenani elikhulu.
Ihhotela izindawo zihlanganisa:
swimming pool nge ibha;
engadini ezungeze ehhotela, okuyinto ngempela elula ngebhayisikili;
ifakwe ithala for Sunbathing;
Cinnamon Garden Ihhotela 4 * (Hikkaduwa) libhekisela ehhotela resort ezincane, okuyinto ayinakho amakamelo angaphezu kwangu-10 nge ocean view noma engadini umbono. On insimu yalo kukhona Bungalow bathinteka. Ihhotela has amakamelo umndeni kuphela amakamelo non-ababhemayo. Inkonde ngayinye ifakwe umshini kuvulandi noma ithala, ifakwe i-TV, fan, air conditioning, izindawo ayina, nesibuko ibha mini, isiqandisi, ngocingo, futhi umshini wokomisa izinwele olutholakala Ngokufaka Isicelo.
Lapho ukubhuka, izivakashi bangathembela nekamelo lokugezela ahlukene kuhlanganise elineshawa / okugeza, ukugeza elisemcengezini, okugeza izesekeli. On isicelo esikhethekile, inqobo ikamelo abantu abanomzimba ongezwani nezinto ezithile noma nge ngcono ukwahlukanisa umsindo. Iphansi wonke amakamelo tile.
Ihhotela likuvumela amakamelo kusuka 20 kuya 50 square metres. m, futhi kukhona izimo imikhaya abasha abaku- iholide nezingane ezincane. Uma kunesidingo, ukuphathwa imahhala kumagumbi cribs noma amasevisi sipho nokugada for ethile.
Cinnamon Garden Ihhotela 4 * inikeza izinhlobo ezimbili ukuhlala ehhotela:
BB - yokuhlala + ibhulakufesi (ngokuvamile babekhonza amaqanda ibhulakufesi, ubhontshisi, ujamu, ibhotela, ubisi, itiye noma ikhofi);
CHA - yokuhlala oziphekelayo kuyona.
Esizeni ngemali eyengeziwe ukudla yokudlela, umthamo bar noma uvakashele ibha. Abaphumule Cinnamon Garden Ihhotela (Hikkaduwa), ukhonza cuisine Asian ngamazwe. Izivakashi nabo bayothola zokudlela kanye amamenyu akhethekile, ukudla okungukuthi wezokudla.
Wamukela izivakashi zayo e-Hikkaduwa. Cinnamon Garden Hotel - kuyihhotela ukuthi wagxila ngokuyinhloko izivakashi asebenzayo, sporty futhi mobile abathanda ukuchitha isikhathi khulula, ehamba ensimini, ukudlala imidlalo, imidlalo kanye kweminye imisebenzi yangaphandle. Ihhotela likuvumela ukuzijabulisa okunjalo abadala kanye nezingane, njenge:
amanzi ezemidlalo nokuzijabulisa;
snorkling (diving imaski);
ithala bethamele ilanga;
Izivakashi ungavakashela izinkambo ezithandekayo nezijabulisayo ezihlukahlukene iziqondiso, ukufunda omagazini noma amaphephandaba, okuyinto zinikezwa impahla, kanye nightclub bese ujabulela umbukiso uhlelo ezimibalabala. Izimenywa zingabe ukujabulela kolwandle azure ku Narigama Beach lolwandle zomphakathi elingamamitha 50 kude. Uma wayefisa, izivakashi uhlale endaweni lolwandle, esemgwaqweni ngaphakathi ehhotela. Emhlabeni zakhiwo imibhede sokhuni, angasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi. Ngenxa emhlabeni Motley kwamanzi ungathola eziningi imizwelo eyakhayo futhi esiqala kusukela ukuphumula.
Ihhotela Cinnamon Garden Ihhotela ivumela izivakashi ukuletha ezifuywayo nawe. Ukubhema endaweni ifakwe endaweni ekhethekile.
On-site yokupaka imahhala, okuyinto pretty elula kulabo uhlela ukuthatha imoto noma Moped ukuqashisa. Uma wayefisa, izivakashi ongawabhuka isevisi Shuttle kusuka esikhumulweni sezindiza, okuyiwona kumelwe akhokhe extra. Vala Cinnamon Garden Ihhotela yilezi:
amathilomu nezindawo zokudlela;
Indawo egcina amagugu esizwe;
izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo;
Ihhotela ifakwe zonke izimo ezikhethekile kubantu abakhubazekile. The yokungcebeleka itholakala 3-4 km ukusuka edolobheni, ofinyelelekayo ngumuntu, ibhasi noma nihambahambe futhi ujabulele ubuhle Sri Lanka.
Ngokusho Izibuyekezo ikhambo, Cinnamon Garden Ihhotela ophelele kulabo abafisa ukufunda okwengeziwe mayelana lizwe, mayelana nomuzi, mayelana izingosi mlando kulabo sendleleni njalo. Izivakashi "ayihlanganisiwe" ehhotela, okungukuthi ukudla noma kweminye imisebenzi, ukuze ukwazi ukwakha izinhlelo zakho siqu usuku.
Ihhotela Hilton Long Beach Resort - Indawo lezinkanyezi ezingu-4 impahla e Hurghada
Izinganekwane ze-Knights. Unyaka ka Knight
Indlela ukulwa butterfly Aporia Crataegi zamakhemikhali Folk amakhambi
Indlela yokukhetha izinyawo ezifanele zezintaba